“ဂျီးတွန်း ပေး ပါ ကိုကိုရယ်”လို့ပြောပြီး အကြမ်းစားပုံတွေ တင်ပေးလာတဲ့ မေပန်းချီ – Cele Cupid
ပရိတ် သတ် ကြီး ရေ မေပန်းချီ က တော့ အမိုက် စား ခန္ဓာ ကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ တွေ နဲ့ တည်ငြိမ် ရင့် ကျက်တဲ့ မျက်နှာ လေးကိုပိုင်ဆို င် ထား တဲ့ သူမဟာ နာမည် ရ မင်းသမီး တွေ ထဲ က တစ်လ က်ဆို လည်း မမှားပါ ဘူးနော်။ ဗီဒီယို တွေ ခေ တ်စားခဲ့တဲ့ ကာ လမှာ လည်း ပရိတ် သတ် တွေ တစ်ခဲ နက် အားပေးမှု ဝန်းရံမှု တွေ ကိုရ ရှိ ခဲ့ တာ ပါ ။
သရုပ် ဆောင် ပိုင်း မှာ ဆိုရင်လည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိ အောင် ဆေးစက် ကျရာ အ ရုပ်ထင်အောင် အကောင်း ဆုံး သရုပ်ဆောင်ပုံ ဖော်နိုင် သူတစ် ယောက် လည်းဖြစ် ပါ တယ် နော်။ အရမ်းမိုက် တဲ့ ကော က်ကြောင်း အလှတွေ ကို ပေါ်လွင်စေ တဲ့ ဆက်ဆီ ကျ ကျ ဖက်ရှင်မျိုးလေး တွေ ကိုများ သောအားဖြင့်ဝတ် တတ် တာကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ အာရုံ စိုက် အားပေး မှုတွေကို ရရှိ ထား ခဲ့ပါ တယ် နော်။
အမိုက် စား ခန္တာကိုယ် ကောက် ကြောင်း အလှ တွေ ပေါ်လွ င်နေတဲ့ ဖက်ရှင် အမိ အမိုက်တွေ နဲ့အတူ ” ချစ်ခဲ့ဖူးလား ? ဖြေပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ့ပုံတွေ ကို တင် လာခဲ့ တာ ပါ ။ အရမ်း လန်း တဲ့ မေပန်းချီ ရဲ့ ပုံလေး တွေ ကို ပရိသတ် ကြီး အတွက် ဝေမျှပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
Crd : Thit Sar
ပရိတ္ သတ္ ႀကီး ေရ ေမပန္းခ်ီ က ေတာ့ အမိုက္ စား ခႏၶာ ကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ေတြ နဲ႔ တည္ၿငိမ္ ရင့္ က်က္တဲ့ မ်က္ႏွာ ေလးကိုပိုင္ဆို င္ ထား တဲ့ သူမဟာ နာမည္ ရ မင္းသမီး ေတြ ထဲ က တစ္လ က္ဆို လည္း မမွားပါ ဘူးေနာ္။ ဗီဒီယို ေတြ ေခ တ္စားခဲ့တဲ့ ကာ လမွာ လည္း ပရိတ္ သတ္ ေတြ တစ္ခဲ နက္ အားေပးမႈ ဝန္းရံမႈ ေတြ ကိုရ ရွိ ခဲ့ တာ ပါ ။
သ႐ုပ္ ေဆာင္ ပိုင္း မွာ ဆိုရင္လည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိ ေအာင္ ေဆးစက္ က်ရာ အ ႐ုပ္ထင္ေအာင္ အေကာင္း ဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ပုံ ေဖာ္နိုင္ သူတစ္ ေယာက္ လည္းျဖစ္ ပါ တယ္ ေနာ္။ အရမ္းမိုက္ တဲ့ ေကာ က္ေၾကာင္း အလွေတြ ကို ေပၚလြင္ေစ တဲ့ ဆက္ဆီ က် က် ဖက္ရွင္မ်ိဳးေလး ေတြ ကိုမ်ား ေသာအားျဖင့္ဝတ္ တတ္ တာေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ အာ႐ုံ စိုက္ အားေပး မႈေတြကို ရရွိ ထား ခဲ့ပါ တယ္ ေနာ္။
အမိုက္ စား ခႏၲာကိုယ္ ေကာက္ ေၾကာင္း အလွ ေတြ ေပၚလြ င္ေနတဲ့ ဖက္ရွင္ အမိ အမိုက္ေတြ နဲ႔အတူ ” ခ်စ္ခဲ့ဖူးလား ? ေျဖပါ ” ဆိုတဲ့ စာ သားေ လး နဲ႔ပုံေတြ ကို တင္ လာခဲ့ တာ ပါ ။ အရမ္း လန္း တဲ့ ေမပန္းခ်ီ ရဲ့ ပုံေလး ေတြ ကို ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ ေဝမၽွေပး လိုက္ ပါ တယ္ ေနာ္ ။
တောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့ ဘော်ဒီနဲ့ ဆက်ဆီကျကျ အတွင်းသားအလှတွေ ပေါ်လွင်အောင် ကပြထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း(ဗီဒီယို)